Dymista vs.Flonase: misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri - Zvinodhaka Vs. Shamwari | Chikunguru 2021
Dzidzo Yehutano Kambani, Nhau Kambani, Info Info Checkout Zvinodhaka Info Nharaunda, Kambani Zvipfuwo Info Info, Hutano Dzidzo Kambani Kambani, Iyo Checkout Hutano Dzidzo, Hutano Hutano Dzidzo, Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Wellness Nhau
Kuru >> Zvinodhaka Vs. Shamwari >> Dymista vs.Flonase: misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Dymista vs.Flonase: misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Kukosora, kuhotsira, kumhanyisa mhino (kana kuzara kwemhino), maziso anonhuwa uye ane mvura, o zvangu! Gore rega rega, vanopfuura mamirioni makumi mashanu vekuAmerican vanotambura kubva kune izvi zvinonetsa zviratidzo zvekurwara. Zvinogona kuva zvinotyisa kusarudza kuti ndeapi mishonga (s) aunoshandisa kurapa zviratidzo zvako.
Dymista naFlonase (fluticasone propionate) mishonga inoshandiswa pakurapa zviratidzo zvehurwere muvana nevakuru. Dymista musanganiswa wemishonga ine zvese antihistamine uye steroid (corticosteroid), uye Flonase ine steroid chete. Ipo Dymista inowanikwa muzita rezita chete, Flonase inowanikwa nemushonga mune fomu generic, uye pamusoro pekambani (OTC) muzita rezita pamwe neakajairika. Kunyange ivo vari vaviri vachirapa kurwara, pane mutsauko mumishonga miviri.
Ndeupi mutsauko mukuru pakati peDymista naFlonase?
Dymista (Chii chinonzi Dymista?) Ine mishonga miviri, azelastine hydrochloride (antihistamine) uye fluticasone propionate (a steroid). Dymista inoratidzirwa kurapa mwaka wegoregic rhinitis muvarwere makore matanhatu zvichikwira avo vanoda kurapwa neese azelastine uye fluticasone kugadzirisa zviratidzo. Iyo parizvino inowanikwa muzita rezita chete, uye nemushonga chete. Kugadziriswa kwega kwega (imwe pfapfaidzo) ine 50 mcg yefluticasone uye 137 mcg yeazelastine.
Flonase (Chii chinonzi Flonase?) Is a nasal steroid uye ine fluticasone propionate. Iyo inoratidzirwa kune manejimendi yeinogara isingaite rhinitis (isingagumi zviratidzo zve postnasal kudonha, inomhanya kana yakanyorova mhino, kusemura) zviratidzo muvakuru uye vana makore mana nekure. Inowanikwa mune generic fomu nekunyorerwa, uye pamusoro pekambani mune zvese mhando (saFlonase Sensimist, Yevana YeFlonase Sensimist, uye Yevana YeFlonase Allergy Relief) uye generic fomu. Kugadziriswa kwega kwega (imwe pfapfaidzo) ine 50 mcg yefluticasone.
Misiyano mikuru pakati peDymista naFlonase
Kirasi yemishonga H1 mupikisi anopikisa (antihistamine) uye corticosteroid Corticosteroid
Brand / generic chinzvimbo Brand chete Rx: generic
OTC: brand uye generic
Zita Rokuzvarwa Azelastine hydrochloride uye fluticasone propionate Fluticasone propionate
Chipimo chemushonga Nasal pfapfaidzo Nasal pfapfaidzo
Standard muyero 1 pfapfaidza mumhino imwe neimwe kaviri pazuva Vakuru: 2 mapiritsi mumhino imwe neimwe zuva nezuva
Vachiri kuyaruka & vana makore mana zvichikwira: 1 pfapfaidza mumhino imwe neimwe zuva nezuva
Nguva yekurapa Zvinosiyana nezviratidzo Zvinosiyana nezviratidzo
Inoshandiswa Na Vana makore matanhatu zvichikwira, vakuru Vana makore mana zvichikwira, vakuru
Unoda mutengo wakanakisa pane Dymista?
Saina kuDymista yambiro yemitengo uye uone kana mutengo uchinja!
Wana machenjedzo emitengo
mangani tylenol 3s kuti akwire kumusoro
Mamiriro ezvinhu akarapwa naDymista naFlonase
Dymista inoratidzirwa yekuzorora kwezviratidzo zvemwaka allergic rhinitis muvarwere vane makore matanhatu zvichikwira avo vanoda zvese azelastine uye fluticasone kurapwa kwekununurwa kwezviratidzo.
Flonase inoratidzirwa muvarwere makore mana uye nepamusoro kune manejimendi emhino zviratidzo zvekusingaperi nonallergic rhinitis.
Mamiriro Dymista Flonase
Nasal zviratidzo zvekusingaperi nonallergic rhinitis Kwete Ehe
Mwaka wegoregic rhinitis Ehe Kwete
Dymista kana Flonase inoshanda zvakanyanya here?
Mune kliniki yekudzidza yekuchengeteka uye kushanda kweDymista muvakuru nevechiri kuyaruka vane makore gumi nemaviri ekuberekwa nekukura, Dymista akawanikwa aine hunyanzvi pazviratidzo zvemumhino kana zvichienzaniswa nechimwe nechimwe chinhu (azelastine, fluticasone) yega pamwe ne placebo.
Mune kuongororwa kwefluticasone nasal spray , varwere vari vaviri kubva mumatatu miedzo vakaona kuderera kukuru kwezviratidzo zvemumhino kana zvichienzaniswa ne placebo.
Kazhinji, ingave Dymista kana Flonase inogona kubatsira zvakanyanya mukugadzirisa zviratidzo. Mushonga unoshanda zvakanyanya unofanirwa kusarudzwa nachiremba wako achifunga nezvehutano hwako (s) uye nhoroondo yezvokurapa, pamwe nemimwe mishonga yauri kutora.
Kuvhavha uye mutengo kuenzanisa kweDymista vs.Flonase
Dymista inowanikwa nemushonga muzita rezita chete. Iko mutengo usina inishuwarenzi ingangoita $ 231. Inishuwarenzi inowanzovhara Dymista; macopays achasiyana asi iwe unogona kushandisa ImweCare koponi uye utore Dymista kweinenge $ 183. Medicare Chikamu D kazhinji hachifukidze Dymista.
Dzimwe inshuwarisi dzinoda kupihwa mvumo yekutanga kuna Dymista, uye chiremba wako achafanirwa kupa rumwe ruzivo kuinishuwarenzi kuti sei uchida mushonga uyu. Kana yako inishuwarenzi isingavhare Dymista zvachose kana kuramba chikumbiro chekumbobvumirwa, chiremba wako anogona panzvimbo pacho kudana mune zvakatemwa zvakatemwa zveFlonase (fluticasone) uye Astepro (azelastine), zvinova zvinhu zviviri zveDymista, zvese zviripo mugeneric, uye zvinofanirwa kufukidzwa neinishuwarenzi.
Flonase inowanikwa nemushonga mune fomu generic chete, uye OTC mune brand kana generic. Iwe unogona kutenga iyo zita rezita zvinodhaka pamusoro pekambani; kazhinji haina kuvharwa neinishuwarenzi kana Medicare Chikamu D. Zvisinei, iwe unogona kuwana generic fluticasone propionate yemadhora gumi nemanomwe uchishandisa kadhi reSingleCare rekuchengetedza kana coupon.
Kazhinji yakafukidzwa neinishuwarenzi? Dzinosiyana; ingangoda mvumo yekutanga Hongu, iyo generic prescription vhezheni
Inowanzo kufukidzwa neMedare? Kwete kazhinji Hongu, iyo generic prescription vhezheni
Vana: 1 pfapfaidza mumhino imwe neimwe zuva nezuva
Chaizvoizvo Medicare copay $ 80-221 $ 40-75
SingleCare mutengo $ 183 $ 17
Zvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeDymista naFlonase
Nekuti ese ari maviri madhiragi ane fluticasone, zvinokanganisa mhedzisiro yeDymista naFlonase zvakafanana. Vazhinji varwere vanoshivirira zvese zvinodhaka zvakanaka kwazvo; zvakakomba mhedzisiro mhedzisiro hazviwanzo. Mhedzisiro inowanzoitika yeFlonase kutemwa nemusoro, kurwadziwa pahuro, kubuda ropa mumhino, kutsamwa kwemhino, kuda kurutsa / kurutsa, zviratidzo zveasima uye kukosora. Iwo akajairika mhedzisiro mhedzisiro yeDymista akachinja pfungwa yekuravira, yemhino kubuda ropa, uye musoro. Bvunza wako mupi wezvehutano kuti uwane izere rondedzero yemhedzisiro.
Zvimwe zvinokanganisa Dymista: Inoshanda? Dymista: Kakawanda Flonase: Inoshanda? Flonase: Kakawanda
Kutemwa nemusoro Ehe piri% Ehe 16.1%
Huro inorwadza Kwete - Ehe 7.8%
Nemhino Ehe piri% Ehe 6.9%
Nasal kutsamwa Kwete - Ehe 3.2%
Kushungurudzika / kurutsa Kwete - Ehe 2.6%
Yakachinja pfungwa yekuravira Ehe 4% Kwete -
Kunobva: DailyMed (Dymista) , Zuva Nezuva (Flonase)
Kubatana kwezvinodhaka kweDymista naFlonase
Nekuti zvese zviri zviviri zvinodhaka zvine fluticasone, mhedzisiro yacho yakafanana. Ne desmopressin, iyo inoshandiswa pakunyorova pamubhedha, kushandiswa panguva imwe chete naFlonase kana Dymista kunogona kutungamira mukuchengetwa kwemvura uye kwakadzika sosiamu.
Yese yemishonga yakanyorwa mutafura pazasi inopindirana (pamwe neFlonase uye Dymista) nenzira iyo inowedzera zvakanyanya mwero westeroid mumuviri, izvo zvinogona kuwedzera njodzi yesteroid mhedzisiro. Izvi zvinokonzerwa ne enzyme inonzi CYP3A4, iyo inobatanidzwa mukudyidzana kwakawanda kwemishonga.
Zvinodhaka Kirasi yemishonga Dymista Flonase
Norvir (ritonavir), Invirase (saquinavir), Rescriptor (delavirdine), Crixivan (indinavir), nezvimwe. Mishonga yeHIV / AIDS Ehe Ehe
DDAVP (desmopressin) Mushonga wekurara pamubhedha Ehe Ehe
Biaxin (clarithromycin) Mishonga inorwisa mabhakitiriya Ehe Ehe
Nizoral (ketoconazole), Sporanox (itraconazole) Antifungals Ehe Ehe
Yambiro dzeDymista naFlonase
Varwere vanofanirwa kuongororwa nguva nenguva nekuda kwemhedzisiro inokanganisa mucosa yemumhino, senge kubuda ropa mumhino, hutachiona hutachiona, uye kutadza kupora kweronda. Flonase haifanire kushandiswa muvarwere vane maronda echino achangoburwa, kuvhiya kwemhino, kana kushungurudzika kwemhino.
Dzimwe yambiro dzekuchenjerera:
diflucan uye monistat panguva imwe chete
Varwere vanoona shanduko yekuona, varwere vane nhoroondo yekuwedzera kweiyo intraocular kumanikidza, kana varwere vanoshandisa Flonase kwenguva refu-vanofanira kuona ophthalmologist kutarisa glaucoma uye cataract.
Hypersensitivity reaction, senge anaphylaxis kana kuputika, zvakataurwa. Flonase inofanira kumiswa kana izvi zvikaitika.
Shandisa nekuchenjerera kune varwere vane tuberculosis iripo; fungal, bhakitiriya, hutachiona, kana hutachiona hwehutachiona; ocular herpes simplex, sezvo Flonase inogona kukonzera kuwedzera kwehutachiona. Zvimwe zvakakomba kana kunyange zvinouraya zviitiko zvehuku kana gwirikwiti zvinogona kuitika mune vanotambura varwere.
Varwere vanofanirwa kuongororwa neadrenal kudzvinyirira. Kana muviri usingaite yakakwana steroid mahormone, zviratidzo zvinogona kusanganisira kuneta, kushaya simba, kuda kurutsa, kurutsa, kuderera kweropa. Flonase inofanira kumiswa zvishoma nezvishoma kana shanduko dzikaitika.
Tarisa kukura kwevarwere vevana nekuda kwekukwanisa kuderedzwa kukura kwekukurumidza; shandisa yakaderera inoshanda dosi.
Nekuda kwekushomeka kwedata iripo, Flonase inofanira kungoshandiswa mu nhumbu kana panguva yekuyamwisa kana rubatsiro kuna mai rwuchipfuudza njodzi kumucheche. Bvunza OB / GYN yako kune mazano.
Nekuti Dymista zvakare ine fluticasone, inowanikwa muFlonase, ese yambiro pamusoro apa Flonase anoshanda kuna Dymista futi. Yambiro inotevera inoshandawo, nekuda kwechikamu cheazelastine cheDymista.
Dymista inogona kukotsira; varwere vanofanirwa kushandisa chenjera pavanotyaira kana kushandisa michina.
Dzivisa doro kana zvimwe zvinokanganisa zveCSS zvine Dymista nekuti musanganiswa unogona kukonzera kukanganisika uye kudzikira kwekusvinura.
Iyo inogadzira inokurudzira chete kushandisa Dymista panguva yepamuviri kana bhenefiti iri yakakura kupfuura njodzi. Bvunza OB / GYN yako kuti utungamirirwe. Dymista haina kukurudzirwa paunenge uchiyamwa; iye mugadziri anokurudzira kana kumisa Dymista kana kumira kuyamwisa.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve Dymista vs. Flonase
Chii chinonzi Dymista?
Dymista mubatanidzwa wemumhino wemhino une antihistamine uye steroid kubatsira kubvisa zviratidzo zvekurwara kwemwaka muvakuru nevana.
Flonase is steroid nasal spray iyo inobatsira kugadzirisa zviratidzo zvemhino zvekusingaperi nonallergic rhinitis (isingagumi zviratidzo zve postnasal kudonha, inomhanya kana yakanyorova mhino, kuhotsira) muvanhu vakuru nevana.
Dymista naFlonase vakafanana here?
Kwete. Flonase ine steroid fluticasone propionate; Dymista ine fluticasone propionate pamwe neantihistamine, azelastine.
Dymista kana Flonase zvirinani here?
Zvinoenderana nezviratidzo zvako; munhu wese akasiyana. Bvunza nyanzvi yako yehutano yezano rako pachako zvichienderana nezvenhoroondo yekurapa uye zviratidzo. Vanhu vazhinji vanoita zvakanaka neimwe yemishonga iyi, kana imwe mishonga yakafanana saNasonex (mometasone) kana Nasacort (triamcinolone).
Unofanira kutora nguva yakareba sei kushandisa Dymista nasal spray?
Kureba kwekurapa kunosiyana nezviratidzo pamwe nemhedzisiro. Bvunza chiremba wako kuti akupe mazano.
Unogona here kushandisa Flonase naDymista pamwe chete?
Kazhinji, iyi mishonga haishandiswe pamwechete. Imwe kana imwe yacho yaizokwana.
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yekushandisa kwenguva refu kweiyo antihistamine?
Dymista, iyo ine antihistamine azelastine, yakaratidzwa kuva zvakanaka-kushivirira mushure megore rimwe rekushandisa. Iyo FDA mvumo yeDymista yaive yakavakirwa pa yakareba-data rekuchengetedza . Iyo yakajairika mhedzisiro mhedzisiro yakashandurwa pfungwa yekuravira, yemhino kubuda ropa, uye musoro. Bvunza wako mupi wezvehutano nezvenguva yakakodzera yekurapwa kwako.
maitiro ekuudza kana nexplanon yaputswa
Rangarira, iwo mushonga unoshanda zvakanyanya unofanirwa kusarudzwa nachiremba wako anozotarisa mufananidzo wese wehutano hwako (s), nhoroondo yehutano, uye mimwe mishonga inogona kusangana naFlonase kana Dymista.
Iyo yakazara mishonga manejimendi manejimendi kune vakuru
Paxil vs.Zoloft: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
ndinoda mushonga wekutenga nebulizer?
kutora zano uye tylenol pamwechete mhedzisiro
nzira yakanakisa yekubvisa candida
mutengo wefuru inopfurwa pa walgreens
maitiro ekurapa nzwara fungus neapuro cider vhiniga
yakareba sei zvakachengeteka kutora phentermine